Wararka Maanta: Isniin, May 14, 2012-Kulan Waxbarasho loogu raadinayo Gabdhaha ku dhaqan Dhulka miyiga ah ee Gobolka Waqooyiga Kenya oo Minnesota lagu qabtay
Amina Maxamed oo ka tirsan hay’ada waxbarashada u qaabilsan Qaramada Midoobay ee UNESCO, isla markaasna iyadu aasaastay urur waxbarasho oo ka jira waqooyiga Kenya oo lagu magacaabo "NOKET" oo ka mid ahayd dadkii ka hadlay kulankan ayaa sheegtay in tan iyo markii ururkeeda la aasaasay ay fursado waxbarasho siiyeen gabdho da’yar oo Soomaaliyeed oo ku nool gobolka waqooyi-bari Kenya kuwaasoo aan horeyn u helin fursado waxbarasho.
"Waxaan waxbarnaa caruur da’da yar aan haysan awood ay wax ku bartaan gaar ahaan waxbarashada sare ee dalka, waxaa jira gabdho badan oo sida aad halkaan ka arkaysaan wax bartay kadib markii ay ka faa’ideysteen fursadaha ururkeena," ayay tiri Aamina Maxamed oo intaasi raacisay; "Hadii aad waxbarto gabar, waxaad waxbartay qoyska oo dhan, maxaa yeelay gabadhu waa aas-aaska uu qoysku ka bilowdo."
Safiirka Kenya u fadhiya dalka Mareykanka oo isuguna kulanka ka hadlay ayaa hoosta ka xariiqay in dalkiisu kaalin fiican ka gaaray dhinaca waxbarashada, gaar ahaan dhiiraglinta dhinaca waxbarashada gabdhaha, isagoo tallaabo horumarineed ku tilmaamay dadaalkaan deeqda waxbarasho loogu raadinayo gabdhaha ku dhaqan waqooyiga Kenya.
Sidoo kale dadkii goobta ka hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa Keith Alison oo ka mid ah aqalka wakiilada Mareykanka, isagoo sharaxay muhiimada waxbarashada iyo sida loogu baahan yahay in ay dadku waxqabsadaan.
"Kenya iyo Minnesota waxaa ka dhexeeya xiriir adag oo xoogan, waana kaasi midka caawa halkaan nagu kulmiyey, waxaana taasi daliil u ah wixii aan ku soo arkay markii aan tagay wadamada Afrika gaar ahaan Kenya..inkastoo Kenya ay la hartamayso caqabado dhowr ah, hadana anigu waxaan aaminsanahay in ay muhiim tahay in dumarka wax la baro si nolosha bulshada sare loogu qaado noloshada bulshada," ayuu yiri Keith Alison.
Dr: Siyaad Cabdullahi, oo ka mid ah ganacsada waaweyn ee Soomaaliyeed ee sida weyn looga yaqaan gobolkaan, oo isugu munaasibadaan soo abaabulay ayaa goobta ka sheegay in qurba joogta Soomaaliyeed looga baahan yahay in ay ka qaybqaataan sare u qaadida waxbarashada wadankooda, gaar ahaanna in wax la baro jiilka soo koraya.
Dadkii kulankaan ka soo qaybgalay ayaa waxaa loo soo bandhigay muuqaal laga soo duubay gabdho da’yar oo wax lagu barayo deeganada iyo dhulka miyi’ga ah ee ku yaala Waqooyi- Galbeed ee Kenya, kuwaasi oo iyagu ka faa’ideystay fursadaha waxbarasho ee uu bixiyo ururkaan Noket.
Dadka horumarinta dhinaca waxbarashada ka shaqeeya ee wadanka Kenya ayaa ku doodaya in ay dalkaasi ka jiraan in ka badan 50 jaamacadood oo si gaar ah loo leeyahay, hase ahaatee jaamacadaasi howlahooda waxbarasho aysan dhaafsiisaneyn caasimadda iyo magaalooyinka waaweyn,, islamarkaasna dhowr arrimood oo ay taasi ka mid tahay ay sabab u noqdeen in ay dhalin badan oo ka mid ah jiilka haatan soo koraya ay waayaan waxbarashada dhexe iyo tan sare.